क्रिसमस अवकाश मनाउन असहयोग तरिका
ईश्वरले पनि अवसरमा भाग लिन सक्दछन्!
अधिकांश मानिसहरू क्रिसमस मान्छन् एक विश्वास आधारित अवकाश हो, र यसैले, एक अपमानजनक तरिकामा मनाईन सक्दैन। तपाईं रमजान , सही मनाउनु अल्लाहमा विश्वास गर्नुपर्छ?
यद्यपि क्रिसमसले प्रायः एक मसीही धार्मिक अवकाशको रूपमा मनाएको छ, जसले वर्षौंमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरेको छ। छुट्टी मा पहिले देखि नै धेरै धर्महरु लाई अन्य धर्मों देखि उधार लिया, जो यसलाई बिना धर्म को क्रिसमस मनाउन को लागी आसान बनाइयो।
पारिवारिक सभाहरूमा क्रिसमसको
क्रिसमसको छुट्टिको समयमा ठूलो संख्यामा परिवारका सभाहरू छन्। किनकि धेरै व्यक्तिहरूले यी बिदाहरूमा समय सकिसकेका छन्, यो यात्रा गर्न राम्रो बहाना छ र परिवारसँग समय व्यतीत गर्दछ। यद्यपी धेरै परिवारको रूपमा चर्च जान्छ, त्यहाँ धेरै परिवारहरू पूर्ण रूपमा सेकेन्डर भएका परिवारहरू गर्न सक्छन्: पापीहरू, उपहार आदान प्रदानहरू, बर्फ स्केटिङ, सोप भान्सामा स्वयम्सेवायर गर्ने, छुट्टी कार्यक्रमहरू, आदि। तपाईंले क्रिसमस छुट्टियाँहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध बलियो बनाउन वार्षिक परिवार पुनर्मिलन।
सम्भवतः अधिक दलहरू क्रिसमसको छुट्टै सिजनको दौडान वर्षको कुनै पनि समयमा भन्दा बढी हुन्छन् (शायद हेलोवीन बाहेक)। त्यहाँ क्रिसमस पार्टनरहरूका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पनि छैन; वास्तवमा, कार्यालयहरू र स्कूलहरूमा भएका धेरै दलहरू पूर्णतया धर्मनिरपेक्ष हुन्छन् किनकि उपस्थित व्यक्तिहरूको धार्मिक विविधता। यदि तपाईं पार्टीको बहानामा बहाना खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो कुनै पनि राम्रो छ।
क्रिसमस सीजनले खाद्यान्नको सम्पूर्ण लाइन - अधिकतर मिठाईको विकास गरेको छ - त्यो वर्षको यस समयमा मात्र देखा पर्दछ। लिटिल, यदि यो हो भने, धार्मिक प्रकृति हो, यस वर्ष वर्षको यो समय विशेष खाना र भोजन सँग मनाउनु एक स्वाभाविक सेल्युलर गतिविधि हो। खाना धेरै उत्सव जस्तो लाग्न सक्दैन, तर अरुको साथमा खाना खाने र आनन्द उठाउन सामाजिक, महत्त्वपूर्ण र मनोवैज्ञानिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।
मानिसहरू क्रिसमसको लागि आफ्नो घर सजाने धेरै पैसा खर्च गर्छन्। यद्यपि त्यहाँ त्यहाँ थुप्रै धार्मिक सजावटहरू छन्, तपाईं पनि धेरै मात्रामा सेकेन्डर सजावट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाइँ सजावट गर्ने काम सामान्यतया घरको रूपमा वा कहिलेकाहीँ परिवर्तनको खातिर, तपाईसँग धेरै गैर-धार्मिक छनौटहरू छन्: सान्टा, रेन्डेयर, सदाबहार, रोशनी, मेमोलेटो। आदि सेकेन्डर सजावट विकल्प प्रचुर मात्रामा छन् किनभने त्यहाँ महत्वपूर्ण गैर- धार्मिक पक्षहरू क्रिसमसको।
सबैभन्दा लोकप्रिय क्रिसमस गतिविधि उपहारहरू आदानप्रदान गर्दै छन्, र यो एक धर्मनिरपेक्ष क्रिसमस राख्न को लागी त्याग्नु पर्दैन। त्यहाँ क्रिसमसको उपहारको बारे केही छैन जुन स्वाभाविक धार्मिक वा क्रिश्चियन हो। कुनै पनि धार्मिक अर्थ को उपहार को लागि एकमात्र तरिका हो यदि तपाईं व्यक्तिगत रूप देखि उनलाई एक निवेश संग; अन्यथा, वरदानहरू सरल रूपमा क्रमबद्ध छन् जुन तपाईं वर्षको समयमा अन्य पटक दिन सक्नुहुनेछ।
क्रिसमसको कम्तीमा धार्मिक पहलू शायद एक हो जसले सबैभन्दा बढी समय, प्रयास, र पैसा समावेश गर्दछ। क्रिसमस किनमेलको बारेमा कम्तीमा बिच क्रिश्चियनको बारेमा केहि पनि छैन, त्यसैले यदि तपाईं कोही हुनुहुन्छ भने वास्तवमा ती ठाउँहरू मजा लिनुहुन्छ, क्रिममस्टिममा किनमेलको आवाज र गन्ध लगाउँदा, तपाईं केवल लोकप्रिय धार्मिक उत्सवमा दिइरहनुभएको छ कि सोच्नु बिना सोच गर्न सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा, क्रिसमसको व्यावसायीकरणमा भाग लिन, तपाईले यसको धार्मिक पक्षहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ।
चर्च सेवामा भाग लिने बाहेक, पैसा वा समय दान गर्न दान गर्ने एक गतिविधि हो जुन कम सेकेन्डर हुन सक्छ किनभने धेरै धर्मार्थहरू धार्मिक छन्। यो मतलब छैन कि दान विशेष रूप देखि धार्मिक हो, यद्यपि। तपाईं एक धर्मार्थ तरिका मा क्रिसमस मनाउन को लागी कुनै धार्मिक धर्मार्थों को बिना - यदि तपाईं देखो भने वहाँ धर्मनिरपेक्ष धर्मार्थहरू हो। तपाईं कुनै पनि धर्मलाई खानपान बिना तपाईंको छनौटको धैर्यमा आफ्नो समय वा पैसा दान गर्न सक्नुहुन्छ।
नयाँ वर्षको उत्सव
क्रिसमस अवकाश सीजन क्रिसमस, तर नयाँ वर्षको होईन। यस व्यक्तिको साथ यस मितिको वरिपरि धेरै पक्ष र परिवारका सभाहरू छन्, र यो पनि क्रिसमस भन्दा बढी सेकेन्डर हो।
यसबारे सबै धार्मिक वा क्रिश्चियनमा केही छैन, त्यसैले धेरै तरिकाहरू पाईन्छ र गैर-मसीहीहरूले यसलाई पारंपरिक ईसाई गतिविधिको कुनै सन्दर्भ बिना मनाउन सक्छन्।
तपाईं क्रिसमस मनाउन धार्मिक हुनु हुँदैन
क्रिसमस एक धार्मिक अवकाश भन्दा एक सांस्कृतिकता हो। यो मतलब छैन कि क्रिसमसको कुनै धार्मिक तत्वहरू छैनन् - यसको विपरीत, वहाँ क्रिसमस धेरै धार्मिक पक्षहरू छन्। यो हामी एक सांस्कृतिक अवकाश बाट आशा गर्नुपर्दछ किनभने धर्म संस्कृतिको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संस्कृति, तथापि, धर्म भन्दा बढी छ, र यसको मतलब यो छ कि क्रिसमसलाई धर्मभन्दा बढी छ भन्दा पनि, यी दिन येशू ख्रीष्टको क्रिश्चियन मुक्तिदाताको जश्न मनाउन तुरुन्तै अलग रहन्छ। वास्तवमा आज क्रिसमसको उत्सवको महत्त्वपूर्ण भाग ईसाई धर्ममा उत्पन्न हुँदैन।
कुनै पनि क्रिसमसको हरेक सम्भावनालाई मनाउँदैन: केहि फ्याँकिएको धुलोले, केही गर्दैन; केहि पिउने eggnog, केहि गर्दैन; केहि एक creche छ, केहि छैन। सबैसँग परम्पराहरू छन् जुन अरू भन्दा बढी अर्थपूर्ण छन्, र धेरैले आफ्नै "परम्पराहरू" सिर्जना गर्छन्। परिणाम यो छ कि सबैले क्रिसमसका केहि पक्षहरू मनाउन र अरूलाई बेवास्ता गर्न छनौट गर्दछ र चयन गर्दछ। यदि तपाइँ एक धर्मनिरपेक्ष क्रिसमस मनाउन चाहनुहुन्छ भने, केवल धार्मिक विकल्पहरूलाई बेवास्ता गर्दछ।
यसबाट छनौट गर्न निकै उपयुक्त छ, यद्यपि ईसाई अधिकारले मानिसलाई विश्वास गर्थ्यो कि परम्पराहरूको मात्र एक "निश्चित" सेट हो जुन "वास्तविक" क्रिसमसको प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रभावकारी रूपमा, तिनीहरू क्रिसमसको फ्रिज छुटाउन चाहन्छन् जुन सन् 1 995मा छुट्टीको एक आदर्श पोस्टकार्ड संस्करण हो, पृष्ठभूमिमा अनन्त पाशमा "व्हाइट क्रिसमस" खेलिरहेको छ।
यो धेरै मान्छे ब्याट्री ड्राइव गर्नेछ र यो क्रिसमसको किसिम जुन कुनै मनाईन्छ। यो संदिग्ध छ कि सबैले वास्तवमा क्रिसमस मनाउने तरिकाले यस तरिकामा मनाएको छ - यो निर्मित पछिल्लो नोभेम्बर महिना को लागी उनीहरु लाई अझ राम्रो लाग्नको लागी बनाइन्छ जस्तो लाग्छ। यो कहिलेकाहीँ मानिसहरूलाई उनीहरूको लागी एक विचारधारा स्वीकार गर्न सजिलो हुन्छ जब तिनीहरू भनिएको छ "यो परम्परा" र तरिका चीजहरू सत्यको सट्टामा प्रयोग गर्दथे: कि यो वास्तविकताको एक सिमुलेशन हो जुन निश्चित लागि एक विचारिक आधारमा आधारित हुन्छ। पावर संरचनाहरू।
विश्वास र यसवाद को बीच कनेक्शन, धर्म, अस्तित्व
के हैरी पोटर एक क्रिश्चियन अलीगरी हो?
इन्फिडल के हो?
अविश्वसनीय बनाम अस्तित्व
शीर्ष दस त्रासदीहरू
रणनीतिहरु एक्वाटिक Phobias - हाइड्रोफोबिया मा आने को लागि
शीत युद्ध: यूएसएस नाउलस (एसएसएन-571)
आर्किटेक्ट रिचर्ड मेयर द्वारा गेटी सेन्टरको बारेमा
Reflexology संग बाहिर तनाव रद्द गर्नुहोस
गणित पाठ्यक्रम अध्ययन: ग्रेड द्वारा ग्रेड
समाजवादी स्त्री - परिभाषा र तुलना
अमेरिकी नागरिक युद्ध: ब्रिगेडियर जनरल रबर्ट एच। मिल्यो
तीन युग प्रणाली - युरोपियन प्रागिङ्गको वर्गीकरण
साधारण मानक कमजोरी क्षमताहरूको तालिका
रक्सीको प्रमाण परिभाषा र उदाहरणहरू
गर्भावस्था परीक्षण कसरी गर्ने काम गर्दछ?
लियोनार्डो, मिशेलान्जेल र रैफेल: इटालियन उच्च पुनर्जागरणको कला
तपाईंको आफ्नै क्रिसमस कार्ड चित्रकारी
बेस्ट वेलेंटाइन डे हास्य को बारे मा प्यार र डेटिंग को बारे मा
स्मारकको आईच 101
डेल्फी मा TStream वर्ग
केनी वेस्ट जीवनी
प्रारम्भिक बिहान ध्यान केन्द्रित गर्ने शीर्ष दस युक्तिहरू
जैव इतिहास - पुरातत्व र इतिहास को जैव घरेलूकरण
अंग्रेजी उच्चारण व्यायाम - यू उभरने वाले पदोन्नति
Ryder कप पछि नामकरण गरिएको छ?
राइजिंग साइन्स: लिबर राइजिंग